Ra’iisul wasaaraha Somalia Cabdi Weli Sheekh Axmed, ayaa gadaal ka riixaya olole xubno ka mid ah baarlamanka Somalia ay doonayaan in shaqada ay uga ceyriyaan saddex ka mid ah Wasiirada ku dhaw Madaxweyne Xasan Sheekh. |
Ra’iisul wasaaraha Somalia Cabdi Weli Sheekh Axmed, ayaa gadaal ka riixaya olole xubno ka mid ah baarlamanka Somalia ay doonayaan in shaqada ay uga ceyriyaan saddex ka mid ah Wasiirada ku dhaw Madaxweyne Xasan Sheekh.
Cabdi Weli wuxuu kulama hoose la leeyahay Xildhibaanada u dhashay Daarood iyo Dir, isagoo weydiistay inay diyaariyaan mooshin ay kaga taqalusayaan Wasiirka Arrimaha gudaha Cabdullahi Goodax iyo Wasiirka Amniga Abdikarim Guled.
Labadii wasiir oo shalay iyo dorraad hortagay baarlamanka, ayaa lagu eedeeyey wax qabad la’aan looguna baaqay is-casilaad.
Inkasta oo Cabdi Weli uu awood u lee yahay inuu xilka ka qaado wasiiradan, ayaa haddana warbixinada waxa ay sheegayaan inuusan dooneyn inuu muujiyo khilaafka isaga iyo madaxweynaha, sidaa darteedna uu u marayo baarlamanka, si aan isaga loogu eedeyn khilaaf.
Dadka siyaasadda Gorfeeyo waxay markii hore aaminsanaayeen dagaalka inuu ku wajahan yahay xulufada Damujadiid hasse yeeshee markii liiska lagu deray Wasiir Cabdullahi Goodax ayaa loo fasiray in ololaha Ra’iisul wasaaraha yahay mid ku qotomo siyaasad qabiil.
Wasiiro kasoo Jubbooyinka iyo Puntland, ayaa horey u dalbaday is-casilaadda labada wasiir, ayaga oo ku eedeeyey inay carqalad ku yihiin maamulka Axmed Madoobe iyo xaaladda Jubbooyinka
Dhammaan xubnaha baarlamanka ee shalay Guuleed weydiistay is-casiladda waxa ay kasoo jeedaan Jubbooyinka iyo Puntland, waxaana ka mid ahaa Cabdirashiid Xiddig.
Caasimada Online, ayaa horey u werisay in intii uu socdaalka ku joogay Kismaayo, Cabdil Weli ay maamulka Jubba ka codsadeen inuu meesha ka saaro Goodax iyo Guuleed.